Madasha Badbaado Qaran oo ka digtey muddo kororsi, iyadoo maanta Baarlamaanka uu leeyahay kulan – Kalfadhi
Madasha Badbaado Qaran oo soo saartay war-saxaafadeed ayaa caddeysay in aysan gacmaha ka laaban doonin wax ay ku ku tilmaameen muddo kororsi lagu carqaladaynayo doorashooyinka, laguna qalqal gelinayo xasilloonida, dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxa sheegeen in hanjabadda ka dhanka ah 15-kii xildhibaan ee uu Mursal sheegay in uu ka ganaxay kulamada golaha shacabka, waxii masuuliyad darro ee ka imaada uu Goddmiyaha golahaas uu qaadi doonno.
Hadalka madasha ayaa imaanaya xili maanta Baarlamaanka uu leeyahay kulan looga hadlayo caabuqa COVID-19. Madasha waxaa ku mideysan Golaha musharaxiinta, madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Somaliland.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay Madasha Badbaado Qaran;